तपाइँको आईफोनमा अहिले द्वन्द्व रोयाल कसरी स्थापना गर्ने आईफोन समाचार
यस पलको सब भन्दा अपेक्षित खेलहरू मध्ये एक हो रोयाले अन्तरविरोध। Clash of Clans को सिर्जनाकर्ता सुरु हुनेछ मार्चमा एक नयाँ रणनीति खेल र अघिल्लो दुई जस्तै, ग्यारेन्टी सफलता छ। यस प्रकारका खेलहरूमा समस्या यो छ कि उनीहरू सुरूवात हुनुभन्दा धेरै अघिदेखि नै घोषणा गरिन्थ्यो र कहिलेकाँही र यस अवस्थामा विश्वव्यापी रूपमा सुरूवात गर्नुभन्दा पहिले यसको सञ्चालनको परीक्षण गर्न यो केही देशहरूमा उपलब्ध हुन्छ।
तर, यदि तपाईं यसलाई प्रयास गर्न चाहानुहुन्छ भने, तपाईं तुरून्तै सक्नुहुनेछ, जब सम्म तपाईं यसलाई डाउनलोड गर्न र स्थापना गर्नु अघि केही चरणहरू पूरा गर्न चाहानुहुन्छ। यो तपाइँको एप्पल आईडी सेट गर्न को बारे मा छ स्टोरहरू मध्ये एक जुन खेल उपलब्ध छ जुन यस अवस्थामा क्यानाडा हो। यस मार्गनिर्देशनमा हामी तपाईंलाई कसरी द्वन्द्व रोयाल स्थापना गर्ने भन्ने बारेमा यो तपाईंको क्षेत्रमा उपलब्ध हुन्छौं।
1 यसको रिलीज हुनुभन्दा अघि क्लेश रोयाल कसरी स्थापना गर्ने
1.1 डाटा प्रविष्ट गर्न सकिन्छ
यसको रिलीज हुनुभन्दा अघि क्लेश रोयाल कसरी स्थापना गर्ने
यो विधि उल्लेख गर्नु महत्वपूर्ण छ यो काम गर्दैन यदि तपाईं कुनै पनि सेवाहरूको सदस्यता लिनुभयो भने एप्पल द्वारा प्रस्ताव गरिएको, एप्पल संगीत जस्तै। यसले काम गर्दैन किनकि यसले हामीलाई सदस्यता रद्द गर्न भन्छ र आज मार्च १ हो र कार्ड हिजो महिनाको लागि रकम लिइएको हो, यो राम्रो सम्झौताको जस्तो देखिदैन, हैन र? यहाँ अब तपाईंको आईओएस उपकरणमा क्लेश रोयाल स्थापना गर्नका लागि निम्न चरणहरू छन्।
हामी आईट्यून्स स्टोर र अनुप्रयोग स्टोरमा जान्छौं।
हामी एप्पल आईडी मा ट्याप गर्नुहोस् र त्यसपछि एप्पल आईडी हेर्नुहोस् मा।
हामी फेरि एप्पल आईडी मा छुन्छौं।
हामी देश वा क्षेत्र परिवर्तन गर्न जाँदैछौं।
हामीले क्यानडा रोज्यौं।
भुक्तानी विधिको रूपमा, हामी कुनै पनि होइनौं
र हामी डेटा थप्दछौं जुन मैले तल प्रदान गर्दछु।
डाटा प्रविष्ट गर्न सकिन्छ
ठेगाना: पसल: २ ब्लोर स्ट्रिट ईस्ट, सूट १२०१
प्रान्त: खुल्ला - ओन्टारियो
पोष्टल कोड: M4W 1A8
फोन: 563 1234567 १२XNUMX।
र त्यो सबै हुनेछ। दिमागमा राख्नुपर्ने एक चीज छ: यो विधि क्यानाडाई स्टोरबाट कानुनी रूपमा खेल डाउनलोड गर्नु हो। यदि हामी हाम्रो देशको स्टोरमा फेरि परिवर्तन हुँदैनौं भने, हामीले स्थापना गरेका अनुप्रयोगहरू अद्यावधिक हुनेछैनन्, त्यसैले यो एकपटक फेरि डाउनलोड भएपछि खेलको डाउनलोड हुन्छ।
के तपाईंले द्वन्द्व रोयललाई प्रयास गर्नुभयो? तिम्रो के बिचार छ?
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » आईफोन » ट्यूटोरियल र म्यानुअल » कसरी कलश रोयाल स्थापना गर्ने तपाईको आईफोन, आईप्याड वा आइपड टचमा
मलाई भएको खराब कुरा यो हो कि यदि तपाईंसँग मसँग पैसा छन् र तपाईंसँग ०.०२ सेन्ट बाँकी छ वा तपाईं त्यस्तै खर्च गर्न सक्नुहुन्न भने एउटा नयाँ खाता सिर्जना गर्नुपर्नेछ जुन मलाई मनपर्दछ यो खेल मलाई मनपर्दछ कुलाहरूको झगडा भन्दा मेरो रुचि यो सत्य हो
देश परिवर्तन गर्दा, यसले भुक्तान विवरणहरूको लागि मलाई सोध्छ।
यो चाल एक महिना भन्दा बढी को लागी गरीएको छ
अर्को सहकर्मी के भन्छन्, मेरो खाता स्पेनमा फिर्ता राख्नको लागि मैले भुक्तान जानकारी प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ। मेरो कुनै पनिमा थिएन। यो कसरी परिमार्जन गर्न सकिन्छ कुनै भुक्तान जानकारी प्रविष्ट गर्न आवश्यक छैन?
यो खेल मलाई ट्रिक मनपर्दछ म सही रूपमा सिफारिस गर्दछ खेल यो एक पास छ
FutureMoth लाई जवाफ दिनुहोस्
हिजो यो आधिकारिक आईओएस र एन्ड्रोइड मा बाहिर आयो
मैले भर्खर स्पेनमा मेरो खाताबाट यसलाई डाउनलोड गरें।
गुगल नक्शाले हामीलाई मार्गहरूमा स्टप थप्ने सम्भावना प्रदान गर्दछ